प्रधानन्यायाधीश जबराबारे प्रचण्ड, नेपाल र भट्टराईको किन मिल्यो बोली ? « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रधानन्यायाधीश जबराबारे प्रचण्ड, नेपाल र भट्टराईको किन मिल्यो बोली ?
काठमाडौं, ८ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको उस्तै आशयको प्रतिक्रिया आयो । प्रचण्डले धनगढी पुगेर जबराको विषयमा बोल्दा बाबुरामले ट्वीटमार्फत् कडा धारणा ल्याए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आल ट्वीट गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने या संसद अघि सर्नुपर्नेबाहेकको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाउनुपर्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल र भट्टराईमाथिको मुद्दा पार लगाइएको छैन ।
जबराको पक्षमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिएका छन् । देउवाले अदालतको विषयमा नबोल्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने भएमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मात्र नभई सबै न्यायाधीशले दिनुपर्ने जकिर गरेका छन् । उनले जबराको राजीनामाले मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै उनको बचाऊ गरेका छन् ।
देउवा पनि जबराको राजीनामाको पक्षमा छैनन् । उनले अडान लिएकैले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच मतैक्यता छैन ।